Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: March 2012
ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ - မူလတန်း - ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်များ
စာအုပ်ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။ မူလတန်း၊ မူလတန်းကြို ကလေးငယ်များအတွက် ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်လေးများ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထုတ် ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ စာအုပ်များဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းအလိုက် ခွဲခြားထားရှိပါတယ်။ အခမဲ့ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များ (A4 ဆိုဒ်) ဖြစ်ပြီး မိဘပြည်သူများအနေနှင့် အလိုရှိပါက နီးစပ်ရာ ကျောင်းသုံးစာအုပ် အရောင်းဆိုင်များတွင် တစ်အုပ်လျှင် ကျပ်တစ်ထောင်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးနှင့် နီးစပ်သော သူများ လက်ကိုင်ထားသင့်သော စာအုပ်များဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
အီးဘုတ်အနေနှင့် အလိုရှိပါက ကျနော် စကန်ဆွဲထားသော အီးဘုတ်များကို အောက်ပါ လင့်များမှ အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ လိုသလောက် ဆွဲချယူနိုင်ပါကြောင်း.....။
= ခဏစောင့်ပါ။ ကွန်ကောင်းလျှင် ဆက်တင်ပေးပါမယ်။
အလွန် နှစ်သက်စရာ စာအုပ်များ ဖြစ်၍ တကူးတက စကန်ဆွဲ၍ မျှဝေပါလိုက်ပါကြောင်း....။
Posted by Ko Gyii at 4:29 PM 1 comment :
Re: Facebook ထဲက Virus ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ... ???
Facebook ထဲက Virus ဆိုတာ ကိုယ်မတင်ပဲနဲ့ သူများ၏ Wall မှာ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ပေါက်ကရတွေ လျောက်တင်တာ ခံရတဲ့ ပြဿနာကို ဆိုလိုတာလား ဒါဆိုရင် နောင် ဒီလိုမျိုး မခံရအောင် Post on my behalf ပါမစ်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ။ တင်ပြီးသားကို ပြန်ဖျက်ဘို့ကိုတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးပါ။
ပြဿနာပါလာတဲ့ ပုံယောင်ဆောင်ထားတဲ့ App တစ်ခုကို ကလစ်ခေါက်မိရင် ဖြစ်နိုင်သလို၊ ပြဿနာ ထည့်ထားတဲ့ Facebook App တစ်ခုကို လက်ခံမိရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Post on my behalf ပါမစ် ကို ပေးသင့် မသင့် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Apps စာရင်းကနေ ဝင်စစ်နိုင်ပါတယ်။ Facebook > Account Settings > Apps ကနေဝင်ပါ။ တန်းဝင်ဘို့ လင့်က https://www.facebook.com/settings?tab=applications ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က ပုံမှာ Scribd ရဲ့ ပါမစ် ကို ဘယ်လို ပိတ်မလဲ နမူနာ ပြထားပါတယ်။ Apps ကနေ Scribd ကို edit လုပ်ပါ။ ကိုယ်မပေးချင်သမျှ ပါမစ်တွေကို Remove (ပိတ်) လိုက်ပါ။
အပေါ်က ပုံ မမြင်ရပါက ဝင်ကြည့်ရန် လင့်မှာ ... http://minus.com/mAFGjcDG9/1f
အလားတူ ကိုယ့်သုံးနေသမျှ App အားလုံးကို Edit လုပ်၍ ပါမစ်များ စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Post On My Behalf ပါမစ်ပေါက်နေလို့ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ပါက ဒီနည်းနှင့် ပြေလည်မည်မဟုတ်ပါ။
On Tue, Mar 20, 2012 at 5:52 PM, Ko Ye` <koye.casper@gmail.com> wrote:
ကျွန်တော့် facebook ထဲက Virus ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ သိတဲ့သူများရှိယင် အကူအညီပေးကြပါ ...
Posted by Ko Gyii at 12:52 PM No comments :
လုံးကွီးတငျကို ဂဏနျးပျေါတငျတာ၊ ဂဏနျးကို မောကျခတြပျတာ (ယူနီကုတျမှာ ပွဿနာ)
ဂဏနျးကို မောကျခတြပျတာ (ယူနီကုတျမှာ ပွဿနာ)
Dear All who implementing Myanmar Language to Unicode Standard,
Let me present some advice regarding Myanmar Currency Symbol. There would be2Formats expressing currency Kyats-Pyays. Presuming K as Currency Symbol (Though we should have better and more specific Symbol for Kyats Currency).
Former one is in Western Standard #,##0.00 K (or) K #,##0.00 and it is so simple.
Latter one is in Myanmar Standard which Myanmar accepted and is widely use Number Format. It is denoted as ...
#,##0 Plus MYANMAR_VOWEL_SIGN_TALL_I for Kyat Symbol and
00 plus MYANMAR_VOWEL_SIGN_AA for Pyas (decimal symbol).
Any Number followed by MYANMAR_VOWEL_SIGN_TALL_I (U102D) can't render correctly.
Any Number followed by MYANMAR_VOWEL_SIGN_AA (U102B) can't render correctly.
Myanmar Unicode users will face problems when they want to express Myanmar Numbers in Latter Number Formats and I would like to advice to solve these problems asap.
ဖျောပွပါပုံကို ကွညျ့ပါခငျဗြာ.။ အကွံပွုခကျြ ၂ ခု ရှိပါတယျ ဒုတိယ အကွံပွုခကျြက မွနျမာစာကို ယူနီကုတျထဲ ထညျ့နသေူတှနေဲ့ ဆိုငျပါတယျ။
(က) လုံးကွီးတငျ ကို ဂဏနျးပျေါတငျတာ မွနျမာရေးထုံးမှာ ရှိတယျ။ ကပျြလို့ ဖတျရပါတယျ။ ဂဏနျးပျေါ လုံးကွီးတငျကို ရအောငျတငျပေးပါ။ အလားတူပဲ ...
(ခ) ဂဏနျးကို မောကျခတြပျတာ မွနျမာရေးထုံးမှာ ရှိတယျ။ ပွားလို့ ဖတျရပါတယျ။ ဂဏနျးပျေါမှာ မောကျခကြို ရအောငျ ထညျ့ပေးပါရနျ...။ လေးစားစှာဖွငျ့....။
Following Phrases are written in Pseudo Unicode Font Zawgyi-One
လုံးကြီးတင်ကို ဂဏန်းပေါ်တင်တာ၊ ဂဏန်းကို မောက်ချတပ်တာ (ယူနီကုတ်မှာ ပြဿနာ)
အကြံပြုချက် ၁) မြန်မာစာအဖွဲ့နဲ့ ဆိုင်တယ်။ ဒါ မြန်မာသဒ္ဒါစာအုပ်၏ မိတ္တူပုံပါ။ ဝိုက်ကွင်း () အပိုဒ် ၄၇။(က)ပါ ဥပမာဖော်ပြချက်ကို ပြင်ဆင်ပေးပါ။ စာရေးထုံးကို ပြီးစလွယ်မရေးသင့်ဘူး။ မျိုးပြနာမ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ တည်နေရာဟာ ဂဏန်းတန်ဘိုး (တစ်ဆယ်မှလွဲသော ဆယ်ပြည့်ကိန်းအားလုံးနှင့် ၎င်းမှအပ) ကိုမူတည်၍ ပြောင်းလဲကြောင်း သိရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုချက်၂) မြန်မာစာကို ယူနီကုတ်ထဲ ထည့်နေသူတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်။ လုံးကြီးတင် ကို ဂဏန်းပေါ်တင်တာ မြန်မာရေးထုံးမှာ ရှိတယ်။ ကျပ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ ဂဏန်းပေါ် လုံးကြီးတင်ကို ရအောင်တင်ပေးပါ။ အလားတူပဲ ... ဂဏန်းကို မောက်ချတပ်တာ မြန်မာရေးထုံးမှာ ရှိတယ်။ ပြားလို့ ဖတ်ရပါတယ်။ ဂဏန်းပေါ်မှာ မောက်ချကို ရအောင် ထည့်ပေးပါရန်...။ လေးစားစွာဖြင့်....။
Posted by Ko Gyii at 11:30 AM No comments :
ပျားအိမ်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဆဋ္ဌဂံ၏ ထောင့်ကျဉ်းဆိုသော အယူအဆ [ပျားအိမ်များ အဘယ်ကြောင့် ဆဋ္ဌဂံပုံ ရှိကြသနည်း ၏ နောက်ဆက်တွဲ
ဖော်ပြပါစာကို ၂၀၁၂ခု ဖေ (၂၇) နေ့က ပို့စ်တင်ပြီးကတည်းက စိတ်ခုနေခဲ့တယ်။ ပျားအိမ်ပုံတွေ လိုက်ရှာကြည့်သော်လည်း ထောင့်ကျဉ်းပါတဲ့ ဆဋ္ဌဂံပုံ မတွေ့ခဲ့။ မယုံရင် ပုံပြင်လို့ မှတ်ရမလို ဖြစ်။ အခုတော့ တွေ့ပါပြီ။ ပျားအိမ် ဆဋ္ဌဂံပုံရဲ့ ထောင့်ကျဉ်းကို ဒီကရီ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ တွက်ခိုင်းတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် ... archimedes-lab.org မှာ...။
ခက်ခဲမှုအဆင့်က အမြင့်ဆုံးဆိုပဲ။ အဖြေမှန် ဖြေနိုင်သူ တစ်ဦးမျှ မရှိဆိုပဲ။ ဂျီသြမေတြီ ညံ့တဲ့ ကျနော့်အတွက် ပုံ နဲ့ ရှင်းပြချက်ကို ကြည့်ရင်းကကို လည်ထွက်နေ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တင်တဲ့ ပို့စ်ပါ ကွန်းတန့်က ကိုယ့်တာဝန်ဆိုတော့ ပူးတွဲထားလိုက်တာ ကောင်းမယ် ယူဆလို့ တလက်စတည်း ဖြေရှင်းချက်ကလေးပါ ဆက်တင်လိုက်ပါရစေခင်ဗျား...။ ထုံးစံအတိုင်း Credited to စာပိုင်ရှင် http://www.archimedes-lab.org/monthly_puzzles_72.html ပေါ့နော်း
Puzzle # 117 Difficulty level: , general math knowledge.
The Geometry of the Bees...
The shape of the wax cells is such that two opposing honeycomb layers nest into each other, with each facet of the closed ends being shared by opposing cells, and with the open ends facing outward, as illustrated in fig. 1 above. Each cell is actuallyarhombic decahedron, that is an hexagonal prism having three rhombi at its closed end (as shown in fig.2above). In short, each cell isaten-sided structure with one side open. Mathematicians made extensive studies of the isoperimetric properties of the honeycomb cells and believed them to be the most efficient design possible. If the faces of every cell contain the LARGEST possible volume with the LEAST possible surface, what is the value of the angle alpha? The faces of the hexagonal prism are each 1-unit wide...
Key words: isoperimetric, rhombic decahedron, rhombus, hexagonal prism.
Square vs rectangle problem.
The best cardboard box.
©G. Sarcone, "Il Calcolo Differenziale ed Integrale", by Ing. Gustavo Bessière, Hoepli Publications, page 114.
a) l is the hypotenuse of the right triangle MNP shown in fig.3above, then:
l2 = (2x)2 + 12 and
l = √(4x2 + 1)
b) The diagonal AB of the rhombus at the closed end of the cell does not depend upon its spatial angulation (the axis AB remains the same even when the spatial angle changes, fig. 4) but upon the sides of the hexagonal prism and the radius r that circumscribes the hexagonal section. Thus the length of AB is:
2√[12 - (1/2)2] = √(4 - 4/4) = √3
c) So, the area of each of the3rhombi at the closed end of the cell is:
√3 √(4x2 + 1)/2
d) The area of each lateral trapezoid of the prism is:
1/2[h + (h - x)] · 1 unit, or
(2h - x)/2 units
e) Therefore, the whole surface of the cell is:
S = 3[√3 √(4x2 + 1)/2] + 6(2h - x)/2 units
S = 3/2[√3 √(4x2 + 1)] + 6h - 3x units
f) To know where the variable x peaks we take the derivative of S at the point 0:
S' = 3/2[8√3 / 2√(4x2 + 1)] -3= 0
6x(√3) / √(4x2 + 1) = 3
x2 = 1/8
g) If we replace x2 in the first equation a) with this last value, we obtain:
l = √(4x2 + 1) = √[4(1/8) + 1] = √1.5
The ratio of both diagonals of the rhombus gives us the tangent of the semi-angle α of the rhombus:
l/d = tg α/2 = √1.5/√3
Thus, the angle α of the rhombus at the closed end of the cell is:
2 arctg √1.5/√3 = 70.52877937.... ≈ 70° 31"
(arc = Inverse trigonometric functions)
No winners... Yes, the puzzle wasalittle bit harder.
Curiously,a3-dimensional honeycomb partition is not optimal! In 1965, the Hungarian mathematician László Fejes Tóth discovered thatacell end composed of two hexagons and two smaller rhombi (see fig. opposite), instead of three rhombi, would actually be 0.035% (or approximately 1 part per 2850) more efficient. But, frankly, this difference is too minute to measure on an actual honeycomb, and irrelevant to the hive economy in terms of efficient use of wax, and because the honeycomb walls haveadefinite thickness, it is not clear that Tóth's structure would indeed be an improvement... In that respect, the honeycomb is more likeawet foam thanadry foam. Several years ago, the physicist D. Weaire and his colleague R. Phelan undertook to construct two-layer foams with equal-sized bubbles, and they found that the dry foams did take on Tóth's pattern. But when they gradually added liquid to thicken the bubble walls, something 'quite dramatic' happened: the structure suddenly switched over to the three-rhombus configuration ofahoneycomb (it seems, then, that the bees got it right after all!). The switch also occurs in the reverse direction as liquid is removed.
Credit and many Thanks to : http://www.archimedes-lab.org/monthly_puzzles_72.html
Posted by Ko Gyii at 8:41 AM No comments :
ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ - မူလတန်း - ကျောင်းသားကိုင်စ...
Re: Facebook ထဲက Virus ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ......
လုံးကွီးတငျကို ဂဏနျးပျေါတငျတာ၊ ဂဏနျးကို မောကျခတြပျ...
ပျားအိမ်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဆဋ္ဌဂံ၏ ထောင့်ကျဉ်းဆိုသော အယ...